comme-un-pro.fr na-agba mbọ idebe webụsaịtị a n'oge. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị zutere nsogbu ma ọ bụ data emechiela, anyị ga-enwe ekele maka ya ma ọ bụrụ na ị mee ka anyị mara. Biko gosi ebe ị gụrụ ozi na-ezighi ezi na webụsaịtị. Anyị ga-eleba anya na nke a ozugbo enwere ike. Biko ziga nzaghachi gị site na email na: tranquillus.france@comme-un-pro.fr.
Anyị enweghị ọrụ maka ọghọm na-esite na ezighi ezi ma ọ bụ erughị eru, ma ọ bụ maka nfu sitere na nsogbu kpatara ma ọ bụ pụta ụwa na mgbasa ozi nke ozi na Internetntanetị, dị ka ọgba aghara ma ọ bụ nkwụsị. Mgbe ị na-eji mpempe akwụkwọ weebụ, anyị na-agbasi mbọ ike ime ka ọnụọgụ nke mpaghara dị mkpa belata. Maka ọnwụ ọ bụla tara ahụhụ n'ihi iji data, ndụmọdụ ma ọ bụ echiche enyere site ma ọ bụ na nnọchite comme-un-pro.fr site na weebụsaịtị a, comme-un-pro.fr enweghị ibu ọrụ.
Ojiji nke weebụsaịtị na ihe omuma ya (tinyere forums) usoro ojiji. Nanị iji weebụsaịtị a na-egosi ihe ọmụma na nnabata nke usoro ojiji a.
Nzaghachi na arịrịọ maka ozi nkeonwe nke e-mail zitere ma ọ bụ jiri mpempe akwụkwọ weebụ ga-emeso n'otu ụzọ ahụ dị ka akwụkwọ ozi. Nke a pụtara na ị nwere ike ịtụ anya nzaghachi n'aka anyị n'ime otu ọnwa n'oge kachasị ọhụrụ. N'ihe banyere arịrịọ dị mgbagwoju anya, anyị ga-agwa gị n'ime otu ọnwa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ọnwa 3 karịa.
Data nkeonwe ọ bụla ị nyere anyị dịka akụkụ nke nzaghachi gị ma ọ bụ rịọ maka ozi ga-eji naanị dabere na nkwupụta nzuzo anyị.
comme-un-pro.fr na-agbaghara ibu ọrụ niile maka ọdịnaya nke weebụsaịtị nke ma ọ bụ site na ya a na-eme hyperlink ma ọ bụ ntụaka ndị ọzọ. Ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nke ndị ọzọ na-enye dị n'okpuru usoro na ọnọdụ ndị ọzọ ahụ.
Ikike niile nke arịa ọgụgụ isi dị na ọdịnaya weebụsaịtị a bụ akụ nke comme-un-pro.fr.
Mbipụta, nkesa na ojiji ọ bụla nke akwụkwọ ndị a ka amachibidoro na-enweghị ikike edere nke comme-un-pro.fr, belụsọ ma ọ bụrụ na ruo oke nke iwu dị mkpa (dị ka ikike ịgwa), ewezuga ihe ngosipụta nke ọdịnaya.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nsogbu nwere ike ịnweta saịtị ahụ, biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị.